ဆိုရှယ်လစ်ပါတီရဲ့ အောင်မြင် အကျိုးပြုခဲ့တဲ့လူရည်ချွန်စီမံကိန်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« False report of Myanmar soldiers’ deaths blamed on radio miscommunication, all safe
“လူရည်ချွန် အကြောင်း မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အမေးအဖြေ” »
Dr. Nay Oo wrote in Luye Chun Group, အလဲဗင်းထဲက ကွန်မင့်န်တစ်ခုပါ …
လူရည်ချွန်စီမံကိန်းက ပထမ ပဲတဲ့ … ”
(ကိုအောင်အောင်ဆိုတဲ့ တစ်ယောက် ရေးထားတာ ဖတ်မိပါတယ်)
Thuza Shein ဆရာကြီးဒေါက်တာညီညီနဲ့ တွေ့တုန်းကလည်း သူလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီလူရည်ချွန်စီမံကိန်းဟာ အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တော်တဲ့ ကလေးတွေကို ချီးမြှင့်ပေးရင် ကလေးတွေက သူတို့ကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့အတွက် ပိုကြိုးစားချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။တခြားကလေးတွေကလဲ သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကြားရတဲ့အခါ အားကျပြီးတော့ နောက်တစ်ခါမှာ သူတို့လဲ လူရည်ချွန်အရွေးခံရအောင် ပိုကြိုးစားလာကြတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။
Myo Thet Oo Socialist party had youth plan. They seeded the ideas of socialism but failed. Military guys did’t have any youth plan. They just sell own country.
Dr. Tint Tint Kyi
eleven မှ မှတ်ချက်-
အခု လူရည်ချွန်ချာတိတ်တွေ ဘယ်လိုရွေးသလဲ မသိ။ အရင်ကတော့ အိမ်က အမျိုးအရင်းကြီးတွေ လူရည်ချွန်အတွက် နေ့စဉ်သတင်းစာတွေကို လိုအပ်မယ်လို့ ထင်တဲ့ အရာတွေ တစ်နှစ်ပါတ်လုံး ကပ်ကြေးနဲ့ ကိုက်၊ ဖိုင်လ်တွဲပြီး ဖတ်ရ၊ ကျက်ရ၊ မှတ်ရပါတယ်။ ပါတီကောင်စီခေတ်လို့ ပြောပေမယ့် သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေကို ကြေးမုံ၊ မြန်မာ့အလင်းတွေထဲက ရှာရ၊ ဖွေရ ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လူရည်ချွန်မဖြေခင် သုံးလ၊လေးလ လောက် အလိုမှာ အလျားခုန်၊ မီတာ ၁၀၀၊ မီတာ ၈၀၀၊ ဒိုက်ထိုး စတဲ့ အားကစားကို မိဘနှစ်ပါးက စံချိန်မှတ်စက်နဲ့ မနက်ခင်းတိုင်း သေသေချာချာ လေ့ကျင့်ကြရပါတယ်။ မြန်မာစကားပုံ၊ စာစီစာကုံး၊ နိုင်ငံတကာ ဗဟုသုတ အဘက်ဘက်က တော်ရ၊ သိရပါတယ်။ စာချည်းဘဲ တော်တဲ့သူ မရွေးပါ။ အတန်းစာ အသင့်အတင့်၊ ပြင်ပဗဟုသုတကောင်း၊ အားကစားသင့်၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်း ဆိုရင် ပါဖို့ ရာခိုင်နှုန်း များပါတယ်။ ဒီလောက်လေ့ကျင့်ပြီးသွားဖြေတာတောင်မှ ပြန်လာကြရင် ရင်wထိပ်ထိပ်နဲ့ အဖြေကိုစောင့်ရတာပါ။ ငိုပွဲကြီးတွေ ၀ှဲချီး ကျင်းပကြရတာပါ။ အခုကလေးတွေကိုလဲ ပညာရေးမှူး ကလေး၊ ဆရာမကြီး ကလေး၊ ဘာညာ ကွာစိ လုပ်မနေဘဲ သေသေချာချာ ရွေးရင် အလွန်ကောင်းပါတယ်။ အရင်လူရည်ချွန်က လူတွေ ဘယ်သူမှ ပေါက်လွှတ်ပဲစား ဖြစ်မသွားတာ လက်တွေ့ပါ။ ကောက်သင်းကောက် ရွေးထားတဲ့ ကလေးတွေကို ကျောင်းဆောင်ကြီးတွေထဲမှာ ပြစ်စလက်ခက် မပြစ်ထားဘဲ ဟိုတယ် (ကြယ်ငါးပွင့် မတတ်နိုင်တောင် အသင့်အတင့်ပေါ့)၊ သွားရေးလာရေး၊ အစားအသောက်ကအစ ပျံနေအောင် ကျွေးစေချင်တာဘဲ။ ဒါမျိုးကတော့ ကျုပ်တို့ အခွန်ဆောင်ထားရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ အကုန် ကုန်ရင် ကုန်ပစေ။ သုံးကြစမ်ပါ။ တကယ်တော်ရင် တကယ် မြှောက်စားတဲ့ ငါတို့ နိုင်ငံပါလားဆိုတဲ့ ချာတိတ်တွေ စိတ်ထဲ စွဲသွားရင် ကျုပ်တို့ နောင်ရေး စိတ်အေးရပြီ။
မိုးမခမှ သရော်စာ ၆-၄-၂၀၁၃ ဖွတ်ကလေး၊ ခိုနီနှင့် လူရည်ချွန် စီမံကိန်းအသစ်
“တို့ ခက်သေးရွာမှာ လူရည်ချွန်တွေ ပြန်ရွေးနေပြီတဲ့ အွန်အွန်ရေ”အီကြာအော်က တစ်တစ်ခွခွ ရေးတတ်သော အပါတ်စဉ်တစ်တစ် ဂျာနယ်ကိုဖတ်ရင်း ဇနီးသည် ဒေါ်အွန်မေးကို လှမ်း၍ပြောလုိုက်သည်။
This entry was posted on April 7, 2013 at 7:17 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.